San Htun's Diary: March 2015
မေလ ၂၃ ရက်နေ့ မှာ ကိုယ်တို့ ကျောင်းမှာ ဘွဲ့ နှင်းသဘင် ကျင်းပမှာတော့မှာပါ။ အဖေ၊ အမေတို့ဘွဲ့ နှင်းသဘင်တက်ဖို့လာမလား၊ မလာဘူးဆိုရင် လာလည်ရင်သုံးဖို့စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ လွှဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ မလွှဲပေးနဲ့ဘွဲ့ နှင်းသဘင်တက်ဖို့လာချင်ပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကျောင်းကို ဖိတ်ခေါ်စာပို့ ခိုင်း အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့။ ကိုယ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တုန်းက စင်္ကာပူမှာ အမေရိကန်ဗီဇာ လျှောက်ခဲ့တာဆိုတော့ ဘယ်လုိုလျှောက်ခဲ့မှန်း ကိုယ်ကိုတိုင်က မေ့နေပြီ။ အဲဒီတုန်းက အွန်လိုင်းမှာဖြည့် အင်တာဗျူးအပွိုင့်မန့် ယူ၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေယူ။ မနက် ၉ နာရီ အင်တာဗျူးဆိုပေမဲ့ နေ့ လည်လောက်မှ ဗျူးတယ်။ စင်္ကာပူက ကျောင်းက နာမည်ကြီးရဲ့ သားနဲ့ဘာလို့ ယူအက်စ်ကျောင်း တက်ချင်တာလဲ။ ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေက ထောက်ပံ့မှာလဲ။ မိဘတွေက ဘာလုပ်လဲ။ ကျောင်းပြီးရင် ပြန်လာမှာလား။ မိသားစု၊ အမျိုးတွေထဲမှာ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူ ရှိလား။ မိသားစု၊ အမျိုးတွေထဲမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး အသင်းဝင်သူ ရှိလား။ မိသားစု၊ အမျိုးတွေထဲမှာ ဦးပိုင်မှာ လုပ်နေတဲ့သူ ရှိလားလို့ မေးတယ်။ ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးဝက်ဆိုဒ်ကို ဝင်ကြည့်တော့ အွန်လုိုင်းမှာ ဖောင်ဖြည့်၊ အင်တာဗျူးအပွိုင့်မန့် ကိုလည်း အွန်လိုင်းကနေယူ ဘယ်ဖောင်တွေ ဖြည့်ရမယ်လို့အသေအချာ ရေးထားတယ်။ ဆိုဒ်မှာရေးထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေထက် အများကြီး လိုသေးတယ်ထင်လို့သေချာအောင် ဂျူးဂျူးကို မေးကြည့်ရတယ်။ ဂျူးဂျူးမိဘတွေက မနှစ်က ဂျူးဂျူးမင်္ဂလာပွဲကို ရန်ကုန်ကနေ လာထားတာဆိုတော့လေ။ အောင်မလေး ဂျူးဂျူးပြောပြမှပဲ ဖောင်၊ စာရွက်စာတမ်းတွေက မနည်းမနောပါလား။
ကျောင်းကခေါ်စာအပြင် ကိုယ့်ခေါ်စာ၊ လက်ရှိဗီဇာ၊ IRS ( Internal Revenue Service) မှာ ၃ နှစ်စာ အခွန်ဆောင်ထားတာ၊ Bank Statement ၆ လစာ၊ Pay Stubs ၃ လစာ၊ မွေးစာရင်းနိုထရီ၊ ရုံးက ဒီကုမ္ဗဏီမှာ ဘယ်ရာထူး၊ ဘယ်လောက်လစာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်း စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီးလိုတယ်။ မကြီးကို ယူအက်စ်က အမ်ဘီအေ၊ အကောက်တင်း ကျောင်းတွေအကြောင်းကို အသိမိတ်ဆွေ တက်နေတဲ့သူတွေမှာ မေးမြန်းခိုင်းတော့ တချို့ တွေက အကုန်အစင် မပြောပြဘူးတဲ့။ ဥပမာ ဘယ်ကျောင်းက ဘာသင်တန်းမှာ တက်နေတဲ့အကြောင်းတောင် ပြောမပြချင်ဘူးလို့သိရတုန်းက ကိုယ့်မှာ အံ့တွေသြလို့ ။ ကိုယ်တွေကတော့ သိသမျှကို တလုံးမချန် ပြောပြတာ။ အဲဒါကြောင့် အဖေက လူတွေကို ကိုယ့်လိုမမှတ်နဲ့ လို့ပြောတာ။ ကိုယ်ကတော့ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်းတွေ အကုန်လုံးက သိသမျှ မချွှင်းမချန် အကုန်ပြောပြတယ်၊ ကူညီကြသူတွေချည်းပဲ။ ဂျူးဂျူးက သိသမျှ မခြွင်းမချန်ပြောပြ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ အကုန်ပို့ ပေးတော့ ကိုယ်က အင်တာနက်မှာ ရှာစရာမလိုတော့ဘူး အချိန်ကုန်သက်သာလိုက်တာ။ ဂျူးဂျူးရေ ကျေးဇူးအရမ်း တင်ပါတယ်နော်။ အရင်ဆုံး အဖေနဲ့ အမေ့ကို အမေရိကန်ဗီဇာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်း၊ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကို အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုင်အဖြစ်တောင်းယူဖို့ ၊ ရက်ကွက်တွင် နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာယူပြီး ရဲစခန်းမှာ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာယူဖို့မောင်မောင့်ကို ခိုင်းရတယ်။ အဲဒါတွေက ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင် ရတယ် မောင်မောင်က ဒီခေတ်ကြီးမှာ အဲဒါတွေ လိုသေးလားတဲ့။ အောင်မလေး မြန်မာပြည်အကြောင်း မသိတာ ကြနေတာပဲ။ မြန်မာပြည်လာလည်လို့တလအတွင်း ပြန်ထွက်ရင် ထွက်ခွာခွင့် Departure Form မလိုဘူးတဲ့။ တကယ်ထွက်တော့ လိုပြန်ရော အမယ်မင်း ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာက တနေ့ တမျိုး။ D From မပါလို့လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်မပြုဘူးလေး ဘာလေးနဲ့ပိုက်ဆံလေးသောင်းလောက် ပေးလိုက်ရင်တော့ ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
တခါတုန်းကလည်း လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါ်မှာ အမေ့နာမည်က ခင်ညွှန့် အစား ခင်မြင့်ဖြစ်နေလို့လေယာဉ်ပေါ် တက်ခွင့် မပြုဘူးတဲ့။ လေယာဉ်လက်မှတ်ရုံးကို ဖုန်းခေါ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကို လေးသောင်းလောက် ပေးလိုက်ရော တက်ခွင့်ရသွားတယ်။ အမှန်က လေယာဉ်လက်မှတ်ရတာနဲ့လက်မှတ်ပေါ်က အချက်အလက်တွေ မှန်မမှန်စစ်ရမှာ။ လေယာဉ်လက်မှတ် ရောင်းတဲ့ရုံးကတော့ မှားမှာပေါ့ သူတို့ က လူအများကြီးနဲ့လုပ်ရတော့ Hurman error ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ မောင်မောင်က စစ်ရမှာ ဒီကောင်က စစ်ရမှန်းမသိ တစက်ကလေးမှ မစေ့စပ် မသေချာတဲ့အကောင်။ ဒီလိုကောင်မျိုး စီးပွားရေးလုပ်လို့ ကတော့ ကြီးပွားဦးမယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဖြည့်တာတွေကို မကြီးက ဖြည့်ပေးတယ်။ အဘွားတွေက ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ ဖြည့်ဖို့ မလိုဘူး။ အဘိုး ၂ ယောက် မွေးသက္ကရာဇ်က မြန်မာလိုဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုပြောင်း။ အဖေ့ဖက်က အဘိုးက အသက် ၈၅ နှစ် စနေသား၊ အမေ့ဖက်က အဘုိုးက အသက် ၈၁ နှစ် စနေသားတဲ့။ ကိုယ်တို့ အဘိုး နှစ်ယောက်လုံးက ဆိုးပေကြီးတွေ။ အမေ့ဖက်က အဘိုးကတော့ အသက် ၂၀ လောက်မှ အဘိုးမှန်း မြင်ဖူးတော့ မချစ်ဘူး။ အဖေ့ဖက်က အဘိုးကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ချစ်လိုက် မတည့်အတူနေ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူတူနေခဲ့တာဆိုတော့ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ချစ်တာပါပဲ။ အဖေနဲ့ဘိုးဘိုးဟာ သားအဖသာဆိုတယ် တစက်ကလေးမှ မတူဘူး။ ဘိုးဘိုးက အသားဖြူဖြူ၊ အရပ်ပုပု လူပုစိတ်တို။ အဖေက အသားညိုညို၊ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည် သူ့ အမေနဲ့သွားတူတယ်။ အဖေဟာ ဘိုးဘိုးနဲ့ တစက်ကလေးမှ မတူတာကိုက ကိုယ်တို့ ကံကောင်းတာ။
Raffles Place, Singapore. 2009 Sept.
သင်္ကြန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွှတ် အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ကို်ယ်တို့ ညီအစ်မက အဖေကနေတဆင့် အဘိုးကို ပိုက်ဆံကန်တော့တဲ့အခါ ကိုယ်က အဖေ့ရေ မြေးတွေက ဘိုးဘိုး ချဲထိုးဖို့ကန်တော့တယ်လို့ပြောလိုက်။ အဖေ ပြန်မပြောမှန်းသိလို့ပြောတာ ဘိုးဘိုးသာ ကြားရင်တော့ ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်နေမလားဘဲ။ တတ်နိုင်ဘူး အမှန်ပြောလို့နာတယ်ဆိုရင်လည်း နာပါစေပေါ့။ ဘိုးဘိုး ဘာလို့ချဲထိုးတာလဲလို့မေးရင် လှုဖို့ တန်းဖို့ တဲ့ အဲဒါဆိုလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက စုဆောင်းထားပါလား။ သားသမီးတွေ ထောက်ပံ့တာကို ချဲထိုးပစ်တာကတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်းသလို မိဘတွေဆိုးရင် သားသမီးတွေ ခံရတာပါပဲ။ ကိုယ့်အသိအစ်မရဲ့အမေဆိုရင် သမီးတွေက နို်င်ငံခြားကနေ လစဉ်ထောက်ပံ့တာကို ချဲတွေထိုးပစ်တယ်၊ လတောင်မကုန်သေးဘူး ပိုက်ဆံမရှိတော့လို့သူများတွေဆီမှာ လိုက်ချေးရတယ်။ ဘုရားတရားလုပ်တယ်ဆုိုပြီး သူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော် ဘယ်သွားသွား နောက်ကနေလိုက်တယ်။ တချို့ ကြတော့လည်း အသက်ကဖြင့် အတော်ကြီးနေပြီ ခုထိသောက်စား ညနေဆိုရင် မူးနေပြီ။ အဲဒီလိုမျိုး မိဘရလို့ ကတော့ ကိုယ်နဲ့ ရန်တကျက်ကျက် ဖြစ်နေမလားဘဲ။ ပညာမတတ်ဘူးလားလို့ မေးရင်လည်း ကျောင်းဆရာမဟောင်း အသိညဏ်ပညာက အတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ကိုယ့်မိဘတွေက သားသမီးအတွက် ဘဝတစ်ခုလုံး ပေးထားပြီး ကိုယ်တို့ ညီအစ်မပြောတာတွေကို နားထောင်လက်ခံတဲ့မိဘတွေ ဖြစ်နေတာ ကိုယ်တကယ် ကံကောင်းတယ်။ သားသမီးတွေက မိဘကို ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် မရှိတော့ မိဘကောင်းရတာ ကုသိုလ်ကံ တမျိုးကောင်းခြင်းပါပဲ။ အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့ အဖေက သူ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားတွေကို ရောက်ဖူးတာ ဒီအမေရိကန်ဗီဇာမှပဲ ရှုပ်ထွေးလိုက်တာနော်လို့ ပြောတော့ ကိုယ်တို့ ညီအစ်မတွေမှာ ရယ်ရသေးတယ် သူလည်း ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ ။ ကျန်တဲ့ဗီဇာတွေက သံရုံးကို သွားစရာမလို၊ အေးဂျင့်ကို ပိုက်ဆံပေးလိုက်တာနဲ့ တင် ကိစ္စပြီးတာကိုး။
အွန်လိုင်းကနေ ဖောင်တွေတင်၊ အင်တာဗျုးဖို့အပွိုင့်မန့် ကို အွန်လိုင်းကနေ ၂ ပတ်စောပြီး ရက်ချိန်းယူ၊ အင်တာမဗျူးခင် တပတ်အလိုမှာ သံရုံးက စာတိုက်ပုံးထဲမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ သွားထည့်၊ ဗီဇာကြေး US$ 160 က ဗီဇာရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ အဆုံး။ သံရုံးအရာရှိက အဖေ့ကို မေးမယ်
သမီးက ယူအက်စ်ကို ဘယ်တုန်းက သွားတာလဲ...
၂၀၁၀ ....မဟုတ်ဘူး အဖေ့ရေ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာမှာ ပြန်လာပြီး နှုတ်ဆက်တာ၊ ယူအက်စ်ကို တကယ်သွားတာက ၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ...
သမီး ယူအက်စ်ကို ရောက်တာ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိပြီလဲ...
၄ နှစ်.... မဟုတ်ဘူး အဖေ့ရေ ၅ နှစ် ရှိနေပြီ...
ယူအက်စ်ကို ဘာလုပ်ဖို့သွားမှာလဲ...
သမီး ဘွဲ့ ယူဖို့ ...
သမီးက ဘာဘွဲ့ ယူမှာလဲ...
ကွန်ပျူတာ.... ကွန်ပျူတာ မာစတာ အဖေ့ရေ...
သမီးက ခု ယူအက်စ် ဘယ်နေရာမှာလဲ...
ဘာဗီဇာနဲ့နေတာလဲ...
အီးပီ...အီးပီဆိုတာ စင်္ကာပူမှာ...ယူအက်စ်မှာက အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီဗီဇာ အဖေ့ရေ...
ကွန်ပျူတာ..အဲ သမီးက ဘာလုပ်နေတာလဲ...အဖေ့ရေ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ..
ယူအက်စ်မှာ အမျိုးတွေ ရှိသလား...
ဖလော်ရီဒါမှာ အမျိုးတွေ ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲ...သူ့ ကိုလည်း ကိုယ်မသိ...ကိုယ်ကလည်း သူ့ ကိုမသိ...ဘယ်လိုတော်စပ်မှန်းလည်း မသိ...
အဲဒါနဲ့ များ ဘယ်လိုလုပ် အမျိုးလို့ပြောမှာလဲ...တော်ကြာ အမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ပြန်မလာဘဲ နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဗီဇာမပေးဘဲ နေလိမ့်မယ်...အမျိုးမရှိဘူးလို့ပြော...
၆ လ...ဟင်.... ၆ လ တောင် အဖေက ဘာလုပ်နေမှာလဲ...တလပဲ နေမယ်လို့ ပြော...စင်္ကာပူလာတုန်းကလည်း ဗီဇာတလရတာကို ပျင်းလို့ ဆိုပြီး နှစ်ပတ်ထဲနဲ့ပြန်ကြရော....
ယူအက်စ် သွားနေတုန်း စီးပွားရေးကို ဘယ်သူကြည့်ပေးမှာလဲ...
ယူအက်စ်ကိုသွားပြီး ပြန်လာမှာ သေချာရဲ့ လား...
အသက် ၈၀ ကျော် အဖေနဲ့ယောက္ခမ ရှိတယ်...စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိတယ်...ယူအက်စ်မှာ ပျင်းစရာကြီး...ရာသီဥတုကလည်း အေးတယ်....မနေနိုင်ပါဘူး ပြန်လာမှာ...
အိုကေ အဖေ ဗီဇာ အောင်သွားပြီ...အဖေ့ကို ဗီဇာတုံး ထုပေးလိုက်မယ်။ ဒီတစ်ခါ အမေ့အလှည့်
ယူအက်စ်ရောက်တာ ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ...
၃ နှစ်...အမေ့ရေ ၅ နှစ် ရှိပြီ
၂၀၁၂ ...အမေ့ရေ သမီး ယူအက်စ်ကို ၂၀၁၁ မှာ သွားတာ...သြော်... အေး...အေး ၂၀၁၁
ဘာလုပ်ဖို့သွားမှာလဲ...
သမီးက ဘာဗီဇာနဲ့နေတာလဲ...
အဲတော်..သမီးက ဘာဗီဇာနဲ့နေတာလဲ...အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ အမေ့ရေ...အိတ်...ဘာပါလိမ့် ...အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ အမေ့ရေ...စာရွက်မှာ ချရေးထား...
ယူအက်စ်မှာ ဘယ်လောက် နေမှာလဲ...
မရှိပါဘူး....အဖေပြောတော့ အမျိုးရှိတယ်ဆို...ဇင်ချောင်းက ဆိုလား...နာမည်လည်း မသိ၊ ဘယ်လိုတော်စပ်မှန်းလည်း မသိ ဘယ်မှာနေမှန်းလည်းမသိ ဖလော်ရီဒါမှာ နေတယ်လို့ကြားတာပဲတဲ့...
အဲတာကိုများ နင့်အဖေက ဖလော်ရီဒါက အမျိုးတွေလို့ပြောနေတာများ အံ့ပါ့....
မိသားစု၊ ဆွေမျိုးထဲမှာ စစ်တပ်မှာ အမှုထမ်းနေတဲ့သူ ရှိလား...
မိသားစု၊ ဆွေမျိုးထဲမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခုိုင်ရေး အသင်းဝင်ရှိလား...
မိသားစု၊ ဆွေမျိုးထဲမှာ ဦးပိုင်လီမီတက်မှာ လုပ်နေတဲ့သူ ရှိလား...
ကိုင်...အမေ အမေရိကန်ဗီဇာ အောင်ပြီ...
နောက်တနေ့အဖေနဲ့ အမေ့ကို အင်တာဗျူးတော့ ညဏ်ကောင်းတဲ့ အဖေက အကုန်မှတ်မိတယ်။ အမေကတော့
ဝါရှင်တန်ဒီစီ....ဟမ်...အမေ့ရေ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ၂၀၁၃ တုန်းက လုပ်ခဲ့တာ...နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတာ ၁ နှစ်ကျော်ပြီ...အေး...အေး နယူးယောက်...
သမီးက ဘာဘွဲ့ ယူမှာလဲ....
အဲ...ဘာလုပ်နေပါ့လိမ့်...သမီးရေ စာရွက်မှာ ရေးထားပြီး ကျက်ရမယ်...အင်တာဗျူးဖြေရင် စာရွက်ကြည့်ပြီး ဖြေလို့ မရဘူးလား...တိန်...
ဒါတောင် ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ လိပ်စာအတိအကျ၊ လစာဘယ်လောက်၊ ဘယ်ကုမ္ဗဏီမှာ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ မပါသေးဘူး။
2001. Economics School (Yangon)
ဗီဇာအရာရှိက အဲဒီမေးခွန်းတွေ မေးရင် အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့ မွေ့ဖြေနိုင်ပါ့မလားမသိ။ ခုတော့ တနေ့ တမျိုး မရိုးရအောင် ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ဖြေနေတာကို ကိုယ်တို့ မှာ တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး တဝါးဝါး တဟားဟား ဖြစ်ရပ်တခု အရင်က ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ဘန်ကောက်က ဘာမင်ဂရပ်ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ပြီး နှလုံးသွေးကြာထဲမှာ စတန်လေးချောင်း ထည့်ရတယ်။ ဒီတော့ နှစ်တိုင်း မက်ဒီကယ်ချက်ကပ် လုပ်ရတယ်။ ၂၀၁၃ မှာတော့ မောင်မောင်က စာမေးပွဲရှိလို့မလိုက်နိုင်ဘူး။ ဘန်ကောက်ကို နှစ်ခေါက်တောင် ရောက်ဖူးနေတာပဲ မောင်မောင် မပါလည်း သူတို့ ဘာသာ သွားတတ်ပါတယ်ဆိုပြီး သွားမယ်လုပ်တော့ စိတ်ပူတတ်တဲ့ မကြီးက စင်္ကာပူနေ လိုက်လာတယ်။ ဝှီးချဲဆားဗစ်ယူတော့ ဝှီးချဲသမားက လာစောင့်နေတယ်။ ဝှီးချဲသမားက အဖေ့ကို လာကြိုနေမှန်း ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ သူ့ နာမည်ကို ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာကိုးတဲ့။ ပတ်စ်ပို့ ပြပြီး လမ်းလျှောက်မယ်လုပ်တော့ ဝှီးချဲသမားက လုံးဝမဆင်းခိုင်းဘူး။ ဝှီးချဲနဲ့ ဆိုတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာမှာ စောင့်စရာ မလိုဘူး။ ဝှီးချဲသမားက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကိုဖြတ်ပြီး ဆေးရုံကောင်တာကို သွားမယ်လုပ်တော့ အဖေက လုံးဝအသွားမခံဘူး။ မကြီးက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကို မဖြတ်နဲ့အဲဒီနားမှာ စောင့်နေလို့မှာထားတာကိုး။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကနေမခွာ ဆေးရုံကောင်တာကိုလည်း လိုက်ပို့ လို့ မရ၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြောလည်း နားမလည်ဆိုတော့ ဝှီးချဲသမားခမျာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ၊ ခေါင်းကို တွင်တွင်ကုတ်လို့ ၊ အု အီး အား ကွိ ကွလို့ငြီးငြူအော်ဟစ်နေပါသတဲ့။
အဖေက နာရီကို ထိုးပြပြီး နာရီဝက်လောက် စောင့်ရဦးမယ်၊ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကို ဝိုင်းပြပြီး ပိုက်ဆံပေးမယ်လို့အင်တာနေရှင်နယ်ဘာသာစကားပြောတာကို နားလည်သလိုရှိပေမဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရတော့ စိတ်ရှုပ်နေတာပေါ့။ နောက်တော့ ဝှီးချဲသမားနဲ့ သိတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတယောက်က ဘာသာပြန်ပေးတော့မှပဲ ဝှီးချဲသမားခမျာ စိတ်အေးသွားပြီး လက်ကေ့စ်တွေ သွားယူပေး။ မကြီးကလည်း တစ်ဖ်များများ ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ဝှီးချဲသမားအကြောင်းကို အဖေ ပြောပြတိုင်း ကိုယ်တို့ မှာ တဟားဟား တဝါးဝါးနဲ့ ပေါ့။ အဖေက အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ယူအက်စ်ကျောင်းက ဘွဲ့ နှင်းသဘင်ကို တက်ချင်တာတဲ့။ နယူးယောက်ကနေ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ကို လေယာဉ်ခက အနည်းဆုံး ၄၀၀၊ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မြို့ တော် ဒက်စ်မွိုင်းကနေ ကျောင်းရှိတဲ့မြို့ အထိ ကားတနာရီခွဲ ထပ်မောင်းရဦးမယ်၊ ဟိုတယ်ခ၊ စားသောက်စရိတ်နဲ့တယောက်ကို ၈၀၀ လောက် ကုန်မယ်၊ ၃ ယောက်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ လောက်ကုန်မယ်။ ကျောင်းမှာဘွဲ့ သွားယူမဲ့အစား နိုင်အာဂရာရေတံခွန်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဘော့စတွန်ကို သွားလည်မှာပေါ့လို့ ပြောတော့ သမီးသဘောပါတဲ့ အဖေကတော့ ဘွဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရရင် ကျေနပ်ပါပြီတဲ့။ ပိုက်ဆံသာ မတွက်ချက်ရဘူးဆိုရင် ကိုယ်က ကိုယ့်မိဘတွေကို ကျောင်းကို ခေါ်သွားချင်တာ။ ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ် ဘယ်လိုပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာကို မိဘတွေကို သိစေချင်၊ တစ်နှစ်တိတိ ကြိတ်မှိတ်စားသောက်ခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး အာဂျီရိုဆောင်က အစားအသောက်တွေကို ကိုယ့်မိဘတွေကို တခါလောက် စားဖူးအောင် ကျွှေးချင်လို့ ။ ဘွဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် အဖေက ဗမာလိုဝတ်မှာလား၊ ဘိုလိုဝတ်မှာလားမေးတော့ ဘိုလိုဝတ်မှာတဲ့။ စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာ ကိုယ်ဘွဲ့ ယူတုန်းကလည်း အဖေက နစ်ကတိုင်တွေဘာတွေနဲ့ဘိုလိုဝတ်တယ်။ နစ်ကတိုင်ဝတ်နေကျမဟုတ်တော့ မေးစေ့အစ်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။
အဖေက သိပ်ဘိုလိုပြောတတ်ချင်တာ ကိုယ်တို့ ညီအစ်မတွေ ပြောတဲ့စကားတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပါရင် မှတ်ထားတယ်။ ပြီးရင် သူလည်း ခေတ်မှီပါတယ်၊ သမီးတွေနဲ့ အပြိုင် ခေတ်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင် ခေတ်မှီပါတယ်ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ ညှပ်ပြောတတ်တယ်။ အော်ရင်ဂျင်ဆိုပြီး နယ်ပြုတ်ကျန်ခဲ့လုို့အော်ရင်ဂျင်နယ် အဖေ့ရေလို့အမှန်ပြင်ပေးရတယ်။ တခါတုန်းက ရွာကို ပြင်သစ်တွေ လာတုန်းက သင့်ခ်ယူလို့နှုတ်ဆက်တော့ မင်္ဂလာပါလို့ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်ဆုိုလို့ကိုယ်တို့ မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ အဖေကတော့ လုပ်ပြီ သင့်ခ်ယူဆိုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတာ ဂွတ်မောနင်းလို့နှုတ်ဆက်ရမှာ အေး...အေး နောက်ခါဆိုရင် ဂွတ်မောနင်းလို့နှုတ်ဆက်မယ်။ အဖေ၊ အဖေ၊ မောင်မောင်၊ ကိုယ်တို့ပထမဆုံးသွားဖူးတဲ့ မိသားစုခရီးက ၁၉၉၉ ကိုယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစ ကျိုက်ထီးရိုး၊ သာမည၊ ကျိုက်ထို ဘုရားဖူး။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးလမ်းမှာတွေ့ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အဖေက နှုတ်ဆက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ လည်ပတ်ရတာ ပျော်လားလို့မေးခိုင်းတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစ ကိုယ်က ကိုယ်သိသလောက် တတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးရတယ်။ ယူအက်စ်ကိုရောက်ရင် ဟိုင်း ဟောင်းအားယူ၊ အိုးမိုင်ဂါ့၊ ဂွတ်၊ ဂရိတ်၊ ဆောရီး၊ Haveagreat day၊ Exactly ၊You know what ၊ God bless you အမေရိကန်လေသံတွေ သင်ပေးလိုက်ဦးမယ်။ ၂၀၀၉ ကိုယ့်ဘွဲ့ နှင်းတက်ဖို့စင်္ကာပူကိုလာတော့ ခေတ်မှီသန့် ရှင်းတဲ့မြို့ တော်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မောင်မောင်က စင်္ကာပူမှာ နေချင်စိတ်မပေါက်ဘဲ အဖေဖြစ်သူက သမီးတို့ အရွယ်ဖြစ်လို့ ကတော့ စင်္ကာပူမှာ နေချင်လိုက်တာလို့အားကျတယ်။ အဖေက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး စကိုက်နဲ့ ဘိုင်ဘာကနေ ဓာတ်ပုံတွေ ပို့ တတ်အောင် သင်ပြီး သူလည်း ပို့ တတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ပို့ တတ်တယ်။ အမေက သမီးရေ အမေရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာပြည်ထက် သာတာကြီးပဲ၊ သူများအစိုးရတွေက တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်နေချိန်မှာ တို့ အစိုးရ ဘာလုပ်နေပါလိမ့်။
National University of Singapore. 2009 Sept.
အမေ့ရေ သူတို့ အမျိုးတွေ ကောင်းစားဖို့ ၊ ပိုချမ်းသာဖို့လုပ်နေတာ တိုင်းပြည်ကတော့ မွဲသထက်မွဲ။ ကြည့်စမ်း စင်္ကာပူဆို သောက်စရာရေတောင် မရှိဘူး သမီးရေ ရေငန်ကနေ ရေချိုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆည်ကြီးပြီးသွားပြီလား။ စင်္ကာပူလိုဖြစ်အောင် လုပ်မယ်တဲ့ အမယ်လေး လီကွမ်ယုလို တော်အာင် အရင်လုပ်ပါဦး။ သမီးတွေနဲ့ အမေ ဆုံကြရင် အစိုးရမကောင်းကြောင်း ပြောကြတော့တာပဲ။ အမေက ကမ္ဘာ့ သတင်းတွေ စိတ်ဝင်စားတယ် အဖေက ည ၈ နာရီ သတင်းတွေ ဖွင့်ထားတတ်တယ်။ ကိုယ်တို့ သားအမိက ဘာလို့ ဖွင့်ထားတာတုန်း ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဆည်တွေ ဘယ်နှစ်ခုဖွင့်တယ်၊ တံတား ဘယ်နှစ်စင်းဆောက်တယ်၊ တက္ကသိုလ် ဘယ်နှစ်ခုဖွင့်တယ် သတင်းထဲမှာတော့ တိုင်းပြည်က တိုးတက်လိုက်တာ အလိမ်တွေ အညာတွေဆိုပြီး တီဗွီကိုပိတ် လုံးဝနားမထောင်ဘူး။ အဖေက ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ဖို့ အတွက် အိမ်မှာ ဆလောင်းတပ်တယ်။ အမေက စီအန်အေ Channel News Asia က လာတဲ့သတင်းတွေကို ကိုယ်တို့ ညီအစ်မတွေကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတတ်တယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကပဲ သတင်းဝါသနာပါတာလား၊ အမေနဲ့ အတူ စီအန်အေ သတင်းတွေ ကြည့်ရင်း သတင်းထောက်တွေကို အားကျတာပဲလားမသိ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ သတင်းကြေငြာသူ Correspondent မြန်မာပြည်က သတင်းတွေမှာလို စာရွက်ကြီးကို ကိုင်ပြီး ရွတ်ပြနေတဲ့သူတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး။ အေဘီစီ ABC news က သတင်းထောက်တွေကို ကိုယ် သိပ်သဘောကျတာ။ သူတို့ စိတ်ဓာတ်၊ အမူအကျင့် ဘယ်လိုရှိသလဲတော့ မသိဘူး သူတို့ ကို မြင်ရတာ ခင်မင်ရင်နှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ရသလိုပဲ။ ဗုဒ္ဓဂါယာကို သမီးအလတ်က ပို့ ပေးတာလို့ကြွားမဆုံး။ မကြီးကတောင် စန်းထွန်းရေ နင် ဗုဒ္ဓဂါယာ ပို့ ပေးတာ အတော်တန်တယ် ကြွားမဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ မနှစ်က စင်္ကာပူမှာ Medical checkup လာလုပ်တော့ အိမ်ခန်းခ၊ စားစရိတ်တွေ မကြီးပေးတာက စာရင်းထဲ မထည့်တော့ဘူး။ ယူအက်စ်မှာ ဘွဲ့ လာယူတဲ့ခရီးကတော့ ကိုယ့်မိဘတွေ ဂုဏ်ယူမဆုံး၊ ပြောလို့ မဆုံး၊ ကြွားလို့ မဆုံးနိုင်တဲ့ ခရီးဖြစ်နေတော့မှာပဲ။
သမီး ဘွဲ့ ယူဖို့ယူအက်စ်ကို သွားရမှာဆိုတာနဲ့ တင် အဖေ့မှာ ဂုဏ်ရှိပါသတဲ့။ အမေကလည်း ကိုယ့်ဆီကို လာရမယ်ဆိုတာနဲ့ တင် ပျော်နေပါသတဲ့။ အဖေ၊ အမေတို့ ဟာ ဟိုးတောရွာဇနပုဒ်ကလေးကနေ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမှာ သားသမီးတွေကို ပညာသင်ပေး၊ သမီးတွေကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားကိုရောက်ဖူး၊ ဘွဲ့ နှင်းသဘင် တက်ရတာ သူတို့ တသက်မှာ မျှော်လင့်မထားခဲ့တာတွေ ဖြစ်လာတော့ ကျေနပ်ပီတိ ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်ကြတယ်။ ရွာမှာ ပထမဆုံးအဖြစ် မကြီးကို ပုသိမ်ကျောင်းမှာထားတော့ အိမ်နီးချင်းတွေက ယောက်ျားရရင် မိဘကို လှည့်ကြည့်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဘာလို့ ပညာသင်ပေးမှာလဲလို့ပြောသတဲ့။ မကြီးက အဖေက ဘာလို့ ဒီလောက်ကြွားမှန်း မသိတော့ဘူးတဲ့။ ကိုယ်တို့ လူငယ်တွေ အချင်းချင်းမှာလည်း ကင်မရာအကြီးကြီး၊ အယ်လ်ဗွီအိတ်တို့ကြွားကြတာပဲ။ လူကြီးတွေမှာတော့ သားသမီးတွေ အောင်မြင်တာကိုပဲ ကြွားစရာရှိတော့ ကြွားနိုင်တုန်း ကြွားပါစေလို့ ။ ကိုယ့်မိဘတွေဟာ သားသမီးပြောတာကို လက်ခံတယ်။ သမီးတွေ ပြောတာကို အတိအကျ လိုက်နာကြတဲ့ မိဘတွေကြောင့်လဲ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ တချို့ မိဘတွေဆို အရက်သောက်၊ နှစ်လုံးထိုး၊ သားသမီးလစဉ်ထောက်ပံ့တာနဲ့ မလောက် ထင်တိုင်းသုံး၊ သားသမီးပြောတာကို လက်မခံ သူသိသူတတ် မိဘတွေနဲ့ ဆို အတော်စိတ်ဆင်းရဲရမှာ။ အမေရိကန်ဗီဇာ အင်တာဗျူးကို ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ မဟုတ်ဘဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြေဆိုနိုင်ပါ့မလား။ မိုင်သောင်းချီခရီးနှင်လို့ကိုယ့်ဆီကို လာကြတဲ့အခါ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်က ဝှီးချဲသမားလို ထရန်စစ်ထိုင်တဲ့လေဆိပ်က ဘယ်ဝှီးချဲသမားကိုများ အု အီး အား ကွိ ကွ ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့မှာပါလိမ့်။ အင်း...ဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့ များ ကိုယ့်ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာကြမှာပါလိမ့်။ ခုနေများတော့ သံရုံးအရာရှိက မေးမမေးမသိ ကိုယ်ကတော့ အဖေနဲ့ အမေကို အင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေမေးရင်း တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ပေါ့။
မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅။
ရေခြားမြေခြား ခရီးသွား - ၁
မိုင်းဖန်၊ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ စန်းထွန်း
စားပြီးပေမဲ့ ဗိုက်ဆာနေတယ် ဗိုက်မဝဘူးလို့ခံစားရတာမျိုးကို ပုသိမ်မှာ ကျောင်းစတက်တဲ့ ၁၄ နှစ် သမီးအရွယ်မှာ ပထမဆုံး ခံစားခဲ့ဖူးတယ်။ ပိစိကွေးလေးတုန်းက မကြီးနဲ့ မောင်မောင်က တစ်ပန်းကန်ပဲ ကုန်ပေမဲ့ ပေါက်စလေးကိုယ်က သုံးပန်ကန်တောင် စားတာတဲ့။ ကိုယ်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီလို အစားကြီးတယ်။ ဟိုင်းကြီးရွာသစ်မှာ လေးတန်းကျောင်းတက်တော့ အမေက မကြီးရှိတဲ့ ပုသိမ်ကိုသွားနေတုန်း အဖေက ကိုယ်တို့ ကို ထမင်းချက်ကျွှေးတယ်။ တပတ်လုံး ကြက်သားချည်း ချက်ကျွှေးလို့အဖေ့ရေ ကြက်သားမစားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောယူရတာ မှတ်မှတ်ရရပဲ။ အဖေ၊ အမေက အသားဟင်း ဘယ်နှစ်ဖတ်ပဲ စားရမယ်လို့သတ်မှတ်မထားဘူး။ သားသမီးတွေ စားနိုင်တာကိုပဲ သူတို့ မှာ ဝမ်းသာနေရတာမလား။ အမေ မအားလို့အမေ့မောင် မင်းချေ ( သူ့ ညီမတွေက ရခိုင်လို အစ်ကို မောင်းချေလို့ခေါ်တာကို ကိုယ်တို့ က လိုက်ခေါ်ရင်း မင်းချေ ဖြစ်သွားတယ်) က ကိုယ်တို့ ကို ထမင်းကျွှေးရင် ဟင်းဘယ်နှစ်ဖတ်ပဲရမယ် ဂိတ်ဆုံးပြီ ဟင်းအနှစ်ပဲထပ်ရမယ် အသားထပ်မရတော့ဘူးလို့ပြောတတ်တယ်။ အမှန်က ထမင်းနည်းနည်း၊ အသားများများ၊ အရွက်များများ စားရမှာ။ ကလေးတွေ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲအရွယ်မှာ အာဟာရပြည့်အောင် ကျွှေးသင့်တယ်။ ကိုယ်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ အသားက ဈေးကြီးလို့ထမင်းများများ အသားနည်းနည်း စားရတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်က ကလေးတွေဟာ နိုင်ငံခြားက ကလေးတွေထက် သေးကွေးပြီး အာဟာရမပြည့်ဘူး။ မီးယပ်သွေးဆုံးရောဂါကို အနောက်တိုင်းသူတွေ အဖြစ်နည်းပြီး အာရှသူတွေ အဖြစ်များတယ်တဲ့။ အနောက်တိုင်းသူတွေက အာဟာရပြည့်အောင်စား အားကစားလုပ်တာကိုး။
ကိုယ် ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတက်တော့ ထမင်းလခပေးစားတယ်။ စကေးနဲ့ စားရတော့ အစတုန်းက မဝဘူးလို့ခံစားရတယ်။ အစားအသောက်ကလည်း ကိုယ်တို့ အိမ်က စားသောက်တာနဲ့မတူတာကိုး။ အဖေ့ရေ ထမင်းမဝဘူးလို့စာရေးရင် အဖေနဲ့ အမေ့မှာ အိပ်မပျော်ဘူး ပညာရေးကောင်းအောင်လို့မြို့ ကျောင်းပို့ တာ မှားများသွားပြီလားပေါ့။ အမေက တလတခေါက် ပုသိမ်တက်လာရင် ကိုယ့်ကို ထမင်းဆိုင်တွေဆီ ခေါ်သွားပြီး အဝစားခိုင်းတော့တာပဲ။ ပုသိမ်အိမ်မှာ နေပြီးတော့ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့စားတတ်သွားတယ်။အဝတ်လျှော်ချင်ရင်တောင် သူများတွေ အဝတ်လှမ်းထားလား၊ အဝတ်လျှော်သင့်ရဲ့ လားလို့သူများအရိပ်အခြေကို ကြည့်ရတယ်။ ပိုက်ဆံပေး၊ ထမင်းလခပေးနေပေမဲ့ သူများအရိပ်အခြေအနေကို ကြည့်ရတော့ အပိုးကျိုးသွားတယ် ဆိုပါတော့။ မောင်မောင့်ကိုလည်း သူများအိမ်မှာ နေဖူးစေချင်တာ။ ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲ လက်ခံတဲ့ သောင်းသောင်း၊ တင့်တင့်တို့ အိမ်မှာ လက်ခံမလား မေးကြည့်တော့ ငယ်သေးလို့ တဲ့ လက်မခံဘူး။ အဲဒီတုန်းက မောင်မောင်က လေးတန်းလား မသိဘူး။ နောက်တော့ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ်တက်ချင်တဲ့ မကြီးကြောင့် ရန်ကုန်ကို ပြောင်းကြတော့ မောင်မောင်က ပုသိမ်အိမ်မှာ မနေလိုက်ရဘူး။ သူများအိမ်မှာ မနေဘူးလို့မောင်မောင်က အပိုးမကျိုးဘူး။ အဖေက အစားအသောက်ကောင်းမက်တော့ အိမ်မှာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ထားပေမဲ့လည်း စားသောက်ဆုိုင်က ဝယ်စားတတ်တယ်။ လှိုင်မြို့ နယ် ဘူတာရုံလမ်းထိပ်က ဇော်ကြေးအိုးဆီချက်ဆိုင်က ငါးပိထောင်းနဲ့ စားရတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်ကို အဖေ သိပ်ကြိုက်တာ။
စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်တော့ တပတ်စာ အသားတွေကို မကြီးက ချက်ပြုတ်ပေးတော့ ကိုယ်က ထမင်းတစ်အိုးတည်၊ အရွက်ကြော်လိုက်ရုံပဲ။ ပိတ်ရက်တွေဆို မကြီးက မုန့် ဟင်းခါး၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတွေချက်တော့ ဗိုက်ဆာတယ်၊ ဗိုက်မဝဘူးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ စင်္ကာပူမှာက ဟော်ကာစင်တာတွေလည်း အများကြီး၊ အစားအသောက်ကလည်းပေါ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန် အစားအသောက်တွေ အားလုံးကို ကိုယ်ကလည်းကြိုက်။ ဗိုက်ဆာတယ်၊ ဗိုက်မဝဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက် ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းလာတက်တဲ့ ၂၀၁၁ မှာ တဖန်ခံစားရပြန်တယ်။ ကျောင်းက မနက်စာ၊ နေ့ လည်စာ၊ ညစာ ကျွှေးတယ် အော်ဂင်းနစ်၊ သက်သက်လွတ်။ ကျောင်းက အစားအသောက်တွေ မစားနိုင်လို့၎ ပေါင် ယူပစ်သလို ပိန်ကျသွားတယ်။ မနက်စာက ပေါင်မုန့် မီးကင်၊ ယိုသုတ်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဆန်းကစ်၊ လိမ္မောသီးဖျော်ရည်၊ နွားနို့ ၊ ကိတ် ( အမေရိကန်စတိုင်မို့မတရားချိုတယ် တခုလောက်ပဲ စားနိုင်တယ်) ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ နေ့ လည်စာက ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ အော်ဂင်းနစ်အသီးအရွက် ဆလပ်သုတ်။ တခါတလေ စားဖိုမှုးက ဆားထည့်ဖို့မေ့သွားလို့ လားမသိ ပေါ့ချွှတ်ချွှတ်ဖြစ်နေလို့ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း ထပ်ဖြူးရတယ်။ ညနေစာကိုတော့ သွားမစားတော့ဘူး နေ့ လည်တုန်းက စားသောက်ဆောင်ကနေ မလာတဲ့ အရွက်တွေကို ထည့်ပြီး ခေါက်ဆွဲကို အခန်းထဲမှာ rice cooker နဲ့ခိုးပြုတ်၊ ကြက်ဥတစ်လုံးဖောက်ထည့်။ အသားစားချင်ရင် ham ထည့်ပေါ့။ အခန်းထဲမှာ ချက်ပြုတ်ခွင့် မရှိဘူး မိရင် ဖိုင်း ၅၀ ဒဏ်ငွေဆောင်ရတယ်။ ကိုယ် ကျောင်းပြီးခါနီးတော့ မီးဖိုချောင်ဖွင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်သက်လွတ်ပဲ ချက်ပြုတ်ရတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီးရင် မသိမ်းဆည်း ပစ်စလက်ခတ်နိုင်တဲ့ တရုတ်မတွေကြောင့် သိပ်မချက်ဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ချက်ပြုတ်ဖို့ ပျင်းတာကိုး။
မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆိုရင် ကန်တင်းထိုင်၊ ကော်ရစ်ဒါမှာ ဟေးလားဝါးလား၊ ကျောင်းသူတွေက ရှိုးစမိုးအပြည့်။ နိုင်ငံခြားမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကတော့ စာသင်ခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ အဆိုင်းမင့်တွေပိလို့ကော်ရစ်ဒါမှာ ဟေးလားဝါးလားလုပ်ချိန်၊ အလှပြင်ချိန်မရှိအောင် ပင်ပန်းတယ်။ ကိုယ် ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းလားတက်တော့ ပုံမှန်ကုပ်ဝဲသာသာရှိနေတဲ့ဆံပင်ကို တိုတိုလေး ညှပ်လိုက်တယ်။ အစ်မရေ ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းသွားတက်မှာမို့ဆံပင်ညှပ်ခ သက်သာအောင်လို့တစ်နှစ်လောက် ဆံပင်မညှပ်ရလေအောင်၊ ရှည်လာရင်လည်း ပုံကျကျလေး ဖြစ်နေအောင် ညှပ်ပေးပါနော်လို့ရီကွတ်လုပ်တယ်။ အဲဒီအစ်မ သေသေချာချာ ညှပ်ပေးလိုက်လို့ရှည်လာတော့လည်း ပုံကျနေတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ကန်တက်ကီမှာ အလုပ်ဝင်ပြီး တော်တော်ကြာမှပဲ ဆံပင်သွားညှပ်ရတော့တယ်။ တရုတ်ကျောင်းသားတွေ အုန်းမှုတ်ခွက်ကေလေးတွေ တပုံစံတည်းဖြစ်နေလို့မေးကြည့်တော့ တတန်းတည်းသား ရှောင်ပိုင်ညှပ်ပေးတာတဲ့။ ဟဲ့ အဲဒါဆို ငါ့ကိုလည်း ညှပ်ပေးပါလားလို့ နောက်တော့ သူ မိန်းကလေးကို မညှပ်တတ်ဘူးတဲ့။ ခုတော့ ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်လည်း ရှိနေကြပြီဆိုတော့ ရှောင်ပိုင်ကို ညှပ်ခိုင်းတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆလွန်းဆီ ပြေးကြတော့မှာ။ ဆူနမ် ဆံပင်ရှည်လာရင် ရာမားက ညှပ်ပေးတယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက ဈေးလျော့နေတဲ့ ရက်ဗလွန်တဘူး ၂ ကျပ်တန်ဝယ်ပြီး ရာမားက ဆေးဆိုးပေးတယ်။ ခုတော့ ဆံပင်ဆေးဆိုးချင်ရင် ဆလွန်းဆီ ပြေးရတော့တာပဲ။ ရာသီဥတုကအေး၊ ဗမာဆိုလို့တစ်ယောက်တည်း၊ အစားအသောက်က မကောင်း၊ တနေကုန် ကျောင်းတက်၊ ည ၁ နာရီအထိ အိမ်စာတွေလုပ်ရတော့ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ ဒီကြားထဲ အစားအသောက်က မကောင်းတော့ ပိုဆိုးတယ်။
ကိုယ်ကျောင်းတက်တဲ့မြို့ လေးက သေးသေးလေး မိနစ် ၂၀ ဆို တမြို့ လုံးနှံ့ ပြီ။ စားသောက်ဆိုင်က တရုတ်ဘူဖေး နှစ်ဆိုင်၊ အိန္ဒိယဘူဖေး တစ်ဆိုင်၊ မက်ဒေါနယ်၊ ဘာဂါကင်း၊ ဝေါမတ်ဘူဖေးပဲ ရှိတယ်။ ဘူဖေးက တခါစားရင် အနည်းဆုံး ၁၀ အထက်ဆိုတော့ နေ့ တိုင်းမစားနိုင်ဘူး။ တပတ်မှ တခါလောက်ပဲ စားနိုင်တယ် ချိုးခြံချွှေတာရတဲ့ ကျောင်းသားဘဝကိုး။ တခါတလေ တရုတ်ဘူဖေးတစ်ဘူး၊ အိန္ဒိယဘူဖေးတစ်ဘူးဝယ်ပြီး ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် ဝေမျှစားရတယ်။ ကိုယ်တို့ စားနိုင်တာက မက်ဒေါနယ်က မက်ချစ်ကန်းဘာဂါ ၁ ကျပ်ခွဲ၊ နပ်ကပ် ၂၀ ခုဝယ်ပြီး ဝေမျှစားကြတယ်။ Pizza Ranch ကြက်ကြော်ဆိုင်ဖွင့်တော့ အားလုံးက ကောင်းတယ်လို့ညွှန်းနေတာနဲ့ကိုယ်တို့ တွေ ချီတက်ကြတယ်။ မိုင်းဖန်ဆို ကြက်ကြော် ၇ ခုလောက် စားတယ် ကိုယ်လည်း ဘာထူးလဲ ပီဇာ ၄ ခု စားတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကတော့ ကိုယ်တို့ ကျောင်းက အငတ်ကျောင်းသားတွေ လက်ချက်နဲ့အရင်းပြုတ်လေမလားမသိ။ ကျောင်းကနေ ထွက်လာပြီး နှစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၃ မှာ ကျောင်းကို စီမီနာတက်ဖို့ပြန်ရတော့ Pizza Ranch ကို ထပ်ရောက်သေးတယ်။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘီလူးစီးသလို စားကြသောက်ကြတာကို သတိရမိသေးတယ် အံ့သြစရာပဲ ကိုယ် အရင်ကလောက် မစားနိုင်တော့ဘူး။ ဒီဗွီပေါက်လို့စတိတ်ရောက်နေတဲ့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအပေါ်က အီထရီယာနိုင်ငံသူ အာရိယာန်က ခရစ်ယာန်၊ သက်သက်လွတ်သမား။ အာဂျီရိုဆောင်က အသီးအရွက်တွေက သိပ်ကောင်းတာဆိုပြီး ခရမ်းချည်သီးသေးသေးလေးတွေကို ဆားဖြူးပြီး လေးပန်းကန်လောက်စားတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့ ကိုယ်တို့ က မျက်နှာမဲ့ရွဲ့ ကြတာပေါ့ အယ်မလေး ဒီအစားသောက်ကိုများ။ ၂၀၁၃ ကျောင်းကို စီမီနာတက်ဖို့ ပြန်လာတော့ အာဂျီရိုဆောင်က အသီးအနှံတွေ အင်မတန်လက်ဆပ်တာ၊ အော်ဂင်နစ်မို့ အရသာပိုရှိတာလားမရှိ အတော့်ကို စားကောင်းတာကတော့ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်ကျောင်းတက်တုန်းက ဝေါမတ်က ကြက်ကင်တစ်ကောင်ဝယ်၊ ပဲကြာဇံပြုတ်၊ ကြက်သားကင်ထည့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်၊ ထမင်းစားဆောင်ကနေ မလာတဲ့ အရွက်တွေထည့်၊ သံပရာညှစ်ထည့်ပြီး သုပ်စားတာ ငတ်နေလို့ လားတော့မသိ သိပ်စားကောင်းတာပဲ။ ကျောင်းမှာတုန်းက နီပါလီနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် Dashain လုပ်တော့ နီပါလီအစားအသောက်တွေ ကျွှေးတယ်။ ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာတွေက အခမဲ့။ ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ ရဲ့ ပွဲတော်ဆိုတော့ မိုင်းဖန်နဲ့ ကိုယ်လည်း ဝင်မပါလို့မဖြစ်ဘူး။ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေ၊ အခမ်းအနားပြင်ဆင်၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ရိုးရာဓလေ့တွေအကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ Presentation၊ ကျောင်းနဲ့ တနာရီခွဲအဝေးက စီဒါးရက်ပစ်မြို့ က နီပါလီစားသောက်ဆိုင်ကနေ အစားသောက်သွားယူ၊ ပြင်ဆင်တာတွေ ကိုယ်တို့ မလုပ်ပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မုန့် ဝေတဲ့တာဝန် ယူရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှလှပပလေး ပြင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတော့ မိတ်ကပ်ဘောက်စ်ကိုဖွင့်လို့ပဲများကြတာပေါ့။ ကျောင်းတက်တဲ့ကာလတလျှောက်လုံး အိပ်မှုန်စုန်မွှား၊ မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်မရှိ၊ moisturizer ကမန်းကတမ်းပွတ် လက်နဲ့ ခေါင်းဖြီးပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်တို့ သုံးယောက် အဲဒီနေ့ မှာ မိတ်ကပ်တွေလိမ်း၊ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ပြီး ရှိုးထုတ်ကြတော့ ကျောင်းသားတွေခမျာ မှတ်တောင်မမှတ်မိဘူးတဲ့။
အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းသားအယောက် ၄၀ ကျော်မှ ကျောင်းသူဆုိုလို့ကိုယ်တို့၎ ယောက်တည်း ပါတာကိုး။ အဲဒီနေ့ ကကျွှေးတဲ့ အစားအသောက်က အိန္ဒိယပွဲတော်တုန်းကထက်ကောင်းလို့ကျောင်းသားတွေက တကျော့၊ နှစ်ကျော့ပြန် တန်းစီကြတယ်။ တတန်းသားတွေဆိုတော့ ဟဲ့ ဘန်ကားတရ်ှစ် နင် နှစ်ခေါက်ရှိပြီမလား၊ အလိုလေး အက်စ်တီယာ နင် သုံးခေါက်ရှိပြီမလားနဲ့ အုံးအုံးကျက်ကျက်ကို ဖြစ်လို့ ။ အေး စားကောင်းလို့ ပါဟ ဒီဟာလေး နည်းနည်းပို ထည့်ပေးပါဟာ ငါ့အတွက် စမူဆာလေး သိမ်းထားပေးပါလား။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာလို့ ရှိရင် စမူဆာက ပြောင်နေလောက်ပြီ။ ဝိုင်းက full scholarship နဲ့ဘန်ကောက်က အေအိုင်တီမှာ အမ်ဘီအေတက်တုန်းကလည်း ကျောင်းသားဘဝ ထုံးစံအတိုင်း ငတ်တာပါပဲတဲ့။ တပတ်တခါ ဟော့ပေါ့သွားစားရင် တပတ်စာ ငတ်ခဲ့သမျှ အတိုးချပြီး စားတော့တာပဲ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ က အီးအက်စ်စီပီမှာ အမ်ဘီအေတက်တုန်းကလည်း ဥရောပမှာဆိုတော့ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်ကြီးတော့ ချွှေတာခြိုးခြံရတာပါပဲတဲ့။ ဝိုင်းအတန်းဖော် စပိန်သားလေးက သူတို့ ထက် ငယ်တယ်။ တစ်နေ့ တော့ ဝိုင်းရေ ငါတော့ ဗိုက်ဆာလိုက်တာလွန်ပါရောဆိုပြီး အသီးအရွက်တွေအောက်မှာ အသားတွေ ဖွတ်တယ်။ ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းတော့ အသီးအရွက်ဈေး ငွေရှင်းတယ်။ ဝိုင်းမှာ ရယ်ချင်တာကို အတင်းမျိုသိပ်ထားရတယ်တဲ့။ နောက်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကတော့ သိပ်ချွှေတာတဲ့ကောင် တလမှာမှတခါ အသားစားတယ်။ အသားတွေဝယ် အဆာပလာတွေနဲ့အသာနှပ် မိုက်ကရိုဝေ့ထဲထည့် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဝုန်းကနဲ အသံကြားလို့သွားကြည့်တော့ အသားတွေက မိုက်ကရိုဝေ့မှာ တစစီဖြစ်နေလို့ငတ်ပြန်ပြီပေါ့ တစ်ခါ။
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ငါသာ အလုပ်ရလို့ ကတော့ နေ့ တိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သွားစားပစ်မယ်လို့ကြုံးဝါးကြတယ်။ ခုတော့ ပုံမှန်ဝင်ငွေရတဲ့ အလုပ်လည်း ရှိနေပြီဆိုတော့ ကျောင်းသားဘဝကလို မငတ်တော့ဘူး၊ ဗိုက်မဆာတော့ဘူး၊ ဗိုက်မဝတာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ငတ်ခဲ့တာတွေကို အမှတ်တရတစ်ခုအနေနဲ့သတိတရ ပြောနေမိတုန်း၊ လွမ်းနေမိတုန်း။ အဲဒီလို သူငယ်ချင်းတွေအတူတူ ငတ်ခဲ့ကြ၊ ဝေမျှစားခဲ့ကြတာတွေကလည်း ကျောင်းသားဘဝရဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲလေ။ မိတ်ဆွေတွေရော ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ငတ်ဖူးပါသလား။
မေ ၂၁ ၊ ၂၀၁၅။